Ichibi elinobunewunewu elinesauna, indawo yomlilo kunye nesikhephe - 130m²
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKay
Wamkelekile endlwini yethu "Bittern".
Ime ngokufanelekileyo, kwindawo ekhethekileyo, ngokuthe ngqo echibini, indawo yokuphumla yemozulu ephantse ingafunyanwa.
Yonwabela ukuzola kunye neyantlukwano yendawo engonakaliswanga yendalo ekude kude nokhenketho oluninzi kwaye uphumle kwindawo yethu etofotofo nenencasa yeholidi yeenkwenkwezi ezi-5 kumbindi weSithili seLake saseMecklenburg.
Ukubhukisha izindlu ezininzi kunokwenzeka. Ndwendwela iphepha lethu lasekhaya.
Ichibi lethu - indawo yokuhlala imele iholide yobumnandi obungaqhelekanga ehlangabezana neminqweno yakho.
Sikunika ukuphumla okucocekileyo ngaphezulu kwe-130 m² yendawo yokuhlala kunye nembono entle yeLake Altdorf. Ikhaya lethu leeholide lenzelwe uthando oluninzi kwiimfuno zakho. Inika indawo yokuba sempilweni, ukubaleka, ixesha kunye kunye nokuphumla.
Ungena kwikhaya leholide kwaye emva kokuwela indawo yeholo ufika kwindawo ebanzi, enezikhukula ezikhanyayo kunye nendawo yokutyela enekhitshi elivulekileyo, elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Indawo yomlilo yegesi ephezulu kwindawo yokuhlala, onokuthi usebenze ngokukhululeka kwi-sofa yokuthuthuzela ngokulawula okude, inika ubushushu obongezelelweyo obunokulungiswa kokufudumeza okuphantsi kuwo onke amagumbi aphantsi.
Kukwakho negumbi lokulala kumgangatho ophantsi elinebhedi enkulu, ekumgangatho ophezulu webhokisi yasentwasahlobo kunye nezivalo zombane.
Iiyure zokuphumla azinakuphepheka kwi-sauna yangaphakathi. Apha ungaphumla kumxholo wentliziyo yakho. Igumbi lokuhlambela elidityanisiweyo lixhotyiswe ngebhafu kunye neshawari ekhazimlisiweyo yeRaindance.
Izinyuko zamaplanga ezikumgangatho ophezulu zikhokelela kumgangatho ongaphezulu obanzi. Nanga amanye amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela.
Iisilingi ezithambekileyo zinika amagumbi okulala umoya opholileyo. Omabini amagumbi okulala axhotyiswe ngebhedi ekumgangatho ophezulu webhokisi kunye nomabonakude. Uya kulala njengezulu.
Ipropathi eyi-870m² inokufikelela echibini kunye nesikhephe sokubheqa esifumaneka kuwe simahla ngexesha lokuhlala kwakho.
Ungonwabela indawo eninzi kwithafa elikhulu kwaye ukonwabele isidlo sakusasa esinentliziyo elangeni elipholileyo lakusasa okanye indibano ekhululekileyo ngokuhlwa.
Ngesicelo, sinokukubonelela ngebhedi ukuya kwiminyaka emi-3 kunye nesitulo esiphezulu. Ikhaya lethu leeholide nalo linomatshini wokuhlamba impahla, isomisi kunye nesefu yendlu.
Ikhompleksi ikwabandakanya inkundla yevolleyball yaselwandle enesanti yeBaltic egqwesileyo, indawo yokudlala yabantwana kunye nendawo yokuqubha enejethi.
Iimbalasane zeholide yakho ngokujonga nje:
• Indawo yechibi elitofotofo elinama-870 m²
• Umbono omangalisayo weAltdorfer Bona enokufikelela echibini layo
• Isikhephe sokubhexa sasimahla ngexesha lokuhlala kwakho
• Ithafa enkulu ejonge emazantsi, ifanitshala yegumbi lokuphumla, iawning, igrill yombane, isitulo elwandle
• Indawo yomlilo yerhasi ekumgangatho ophezulu kwindawo evulekileyo yokutyela
• Ukufudumeza umgangatho ophantsi kuwo onke amagumbi okuhlala kumgangatho ophantsi
• Oomabonakude aba-3
• Amagumbi okulala ama-3 aneebhedi ezikumgangatho ophezulu weebhokisi zasentwasahlobo
• I-sauna yaseFinnish kunye ne-steam eneziphumo zokukhanya
• Amagumbi okuhlambela ama-2 aneshawa yokuhamba-ngena esempilweni
• Ibhedi yomntwana kunye nesitulo esiphakamileyo
• Ukurenta iibhayisekile kunye nephenyane kwisiza
• Iindawo zokupaka ezi-2 ngqo endlwini
• Ibala lokudlala labantwana kunye nebala levolleyball yaselwandle
- inkonzo yesonka
-Nikeza iimasaji zempilo kwindawo
Zivumele umangaliswe kwaye, ngaphezu kwakho konke, ukuthotywa.
Nathi unokusebenza ngegalufa - ukukhwela ihashe - ukukhwela intaba - ukuloba - ibhola yevoli yolwandle - ukukhwela ibhayisekile, ukhenketho lwephenyane okanye uphumle nje kwindawo yethu entle.
Indawo yakho yeholide: I-Nossentiner / Schwinzer Heide
Ipaki yendalo inabela ngaphezulu kwe-360 km² kwaye namachibi ayo aphantse abe ngama-60 aweSithili seLake saseMecklenburg.
Ihlathi likhula ngaphezu kwe-50% yendawo yepaki. Ngethamsanqa elincinci, unokujonga uninzi lwezilwanyana ezinqabileyo kunye neentlobo zezityalo ekuhambeni okude okanye ukukhwela ibhayisekile kwindalo.
Yonke le paki yendalo yabhengezwa njengendawo yokugcina iintaka yaseYurophu ngenxa yeentlobo ngeentlobo zeentaka ezisengozini yokuphela. Indawo yepaki yendalo iphuhliswa ngaphezulu kwe-250 km yebhayisekile kunye neendlela zokuhamba intaba, iikhilomitha ezili-100 zeendlela zokuhamba ezijikelezayo kunye ne-160 km yeendlela zomkhala.
Ipaki yendalo yaseNossentiner / Schwinzer Heide yenye yezona ndawo zimnyama eJamani, kwaye ibe luphawu lomgangatho kubatyeleli abaninzi. Kubusuku obuzolileyo, asingabo nje abantu basedolophini abamangaliswa ziinkwenkwezi ezininzi.
Ixesha eliphakamileyo lerhafu yabakhenkethi: 1.50 € ngomntu nobusuku (ukusuka kwiminyaka eyi-16)
Ixesha eliphantsi lerhafu yabakhenkethi: € 0.50 ngomntu nobusuku (ukususela kwiminyaka eyi-16)
Impahla yokuhlamba kunye nenkonzo yokucoca: Kwimeko yokuhlala ixesha elide, ukucocwa okuphakathi kunye nokutshintshiselana ngelinen yebhedi kunye neetawuli zinokwenzeka.
Indawo yokwakhiwa kwekhaya leeholide iyodwa. Ngqo kwibhanki engasentla ye-Altdorfer See, ejikelezwe yi-landscape engazange ichukunyiswe kwi-Nossentiner / Schwinzer Heide yendalo yendalo. Indawo yeholide ezimeleyo inezindlu eziyi-19 ezikwindawo ebanzi.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide yaseKrakow am See yaziwa ngomoya wayo obalaseleyo kunye nomgangatho wokuhlambela kwaye ngokufanelekileyo inegama elithi "iholide yezempilo yemozulu".
Kumalunga neekhilomitha ezingama-20 ukuya kwidolophu yesithili saseGüstrow. I-Krakow ifikeleleka lula ngemoto nge-A19 (i-Berlin-Rostock, i-Linstow junction malunga ne-8 km). Kuthatha malunga neeyure ezi-2 ukufika apho usuka eBerlin okanye eHamburg. Kuyakhawuleza ukuya kuLwandle lweBaltic. Emva kwemizuzu engama-50 nje ungabeka iinyawo zakho kwisanti yoLwandle lweBaltic eWarnemünde.
Umbindi wesixeko saseKrakow am See yimizuzu nje embalwa kude nekhaya leeholide. Apho uya kufumana iivenkile kunye neeresityu. I-promenade yechibi kunye nedolophu endala ikumema ukuba uhambe kwaye uhlale. Hamba ngaselunxwemeni lwechibi ukusuka eKrakower See kunye nezikhephe ezifulelwe ngengca ukuya kwinqaba yaseJörnberg. Ukusuka apho ungonwabela umbono onomtsalane wepanorama yamachibi ali-15 ajikeleze iKrakow.
Ngokubhukisha ufumana ukufikelela kwi-app yeendwendwe zethu, onokuzisebenzisa ukunxibelelana nathi. Ulwazi malunga nendlu, indawo ejikelezileyo kunye neenyaniso ezinomdla malunga nommandla unokufumaneka apho ngokuchofoza okukodwa.
Kwiintsuku ezi-4 phambi kokufika kwakho uya kufumana i-imeyile ezenzekelayo kunye nazo zonke iinkcukacha zokunikezela ngezitshixo.
Ngokubhukisha ufumana ukufikelela kwi-app yeendwendwe zethu, onokuzisebenzisa ukunxibelelana nathi. Ulwazi malunga nendlu, indawo ejikelezileyo kunye neenyaniso ezinomdla malunga n…